Jiilka saddexaad ee AirPods ayaa imaan doona 2021 | Waxaan ka socdaa mac
Haddii aad fileysay qaar ka mid ah AirPods cusub sanadkaan, waad iloobi kartaa fikradda. Sida ay sheegayaan wararka xanta ah ee ugu dambeeyay, Apple ma bilaabi doonto soo saarida samaacadahaas cusub ilaa semesterka koowaad ee 2021. Marka waxaa lafilayaa in lasii daayo dhamaadka sanadka dambe. Waxay leedahay xoogaa caqli gal ah haddii aan u maleyneyno in sanadkaan, cusub ee AirPods Pro Lite iyo Supraaurals ay yimaadaan.
Jiilka saddexaad ee AirPods ee 2021, sida uu qabo falanqeeyaha Kuo.
Falanqeeyaha Kuo, Kuo-da joogtada ah, waxaan dhihi karnaa, wuxuu sii daayay qoraal uu ku sheegayo in Apple aysan soo saari doonin nooc cusub oo ah AirPods illaa iyo sanadka 2021. Taabadalkeed, dhamaadka, maadaama lagu qeexay qoraalka in soo saarida dhagaha dhagaha ee cusub ayaa ka bilaaban doona bishii afraad ee simistarka koowaad (Abriil) ee sanadkaas.
Kuo wuxuu qeexayaa in nashqadaha moodellada cusub aysan waxba ka beddeli doonin dibadda. Waan heleynaa warka gudaha.
Waxa cusub ayaa ah inay qaadan doonaan SiP-ga beddel naqshadeynta AirPods jiilka labaad PCB + guddiga SMT adag-dabacsan. Waxaan aaminsanahay in Apple ay ku dari doonto qaabkan cusub sababo la xiriira hoos u dhaca dalabka jiilka labaad ‌AirPods‌. Luxshare ICT ayaa noqon doonta bixiyaha ugu weyn ee qaabkan cusub.
Hadda dhibaato weyn ayaa na haysata. Haddii aad fiiro gaar ah u yeelato Kuo ama falanqeeyayaasha kale ee sheega in sanadkaan 2020 aan heli doono cusbooneysiin ku saabsan AirPods. Shakhsiyan, waxaan fiiro gaar ah u yeelan doonaa tan ugu horeysa, sababtoo ah sanadkaan, Apple wali ma bilaabin (had iyo jeer sida ay sheegayaan warar xan ah) AirPods Pro cusub, supraaural iyo qaar ka mid ah Beats cusub. Waxay u muuqan doontaa xoogaa geesinimo ah shirkadda inay bilowdo jiilka saddexaad ee AirPods. Xagga sare tixgelinta taas wax badan iskama badali doonaan banaanka.
Kaliya waqtiga ayaa cadeyn doona mid iyo gorfeeyeyaal kale waxaanan halkan u joogi doonaa inaan u sheegno dhammaan wararka soo kordha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Jiilka saddexaad ee AirPods ayaa imaan doona 2021
PDF Plus, waa bilaash wakhti xadidan
Apple TV + si ay u soo bandhigaan majaajillo cusub oo uu jilayo Will Ferrel